Gargaarsa App malee faayila keenya dhoksuun akkaatan danda'amu-moobaayila irratti - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
Tartiiba faayila dhoksuuf
1. File manager moobayila keetii banuudhaan, faayila yookiin folder(qabee) dhoksuu barbaadde irratti gadi qabi
2. Gaafa gadi qabdu filannoowwan gara garaa heddutu siif baha. Isaan keessaa filannoo rename jedhu filadhu
3. Amma maqaa qabee yookiin faayilichaa mallattoo “tuqaa(.)” dursiisuun jijjiiruu qabna. kana yoo jedhu, fakkeenyaaf maqaa faayilaa barataa.pdf yoo ta’e, gara .barataa.pdf dhaatti jijjiirra jechuudha.
4. Erga jijjiirree booda Ok kan jedhu irratti tuqna. Amma guutumatti faayilichi dhokatee jira.
Tartiiba faayila dhokafame ittiin baasan
Faayiloota haala armaan olii kanaan dhokate deebistee ilaaluuf yookiin banuu yoo barbaadde file manager keessa deemuun show hidden file kan jedhu irratti tuquu qofa. Akkaataa gosa moobaayila isin gargaaramtaniin iddoowwanii fi haalonni itti argaman gara gara ta’uu danda’a. Garuu immoo haalli faayiloota gara garaa ittiin dhoksuun danda’amu akka armaan olii kana.
Adeemsota yookiin tartiibota armaan olii kana gargaaramuudhaan faayiloota keenya moobaayila irratti gargaarsa app tokko malee ofumaan dhoksuu dandeenya.
Yeroo keessan fudhattanii dubbisuu keessanii heddu galatoomaa!! Yaadaa fi gaafii yoo qabaattan nuun gahuu dandeessu. Akkasumas barnoonni nuti gama viidiyoon kenninu akka isin jala hin dabarreef chaanalii keenya subscribe godhaa!!
Akkaataa Faayiloota torrent buufachuun danda’amu